Home Wararka Taliyaha Booliiska Puntland oo “Deni” ku eedeeyay Boobka Doorashada
Taliyaha Booliiska Puntland oo “Deni” ku eedeeyay Boobka Doorashada
Taliyihii hore ee Booliiska Puntland S/guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdi yare ayaa si adag uga horyimid qaabka loo wado doorashada ka socota Garoowe.
Waxaa uu sheegay in la heli karay goobo ka muhiimsan xerada ciidanka oo la aamisan yahay balse uu socdo qorshe lagu boobayo.
“Waxaa ayaan darro ah in Puntland oo jirsatay 23 sanno maanta lagu qabto doorashada Aqalka hoose ee barlamanka Somalia xerada ciidamada ee 54aad iyadoo la heli karay goobo kaga haboon”ayuu yiri Taliyaha.
Waxaa uu intaasi kusii daray “Talaabadan oo baalmarsan habraacyadii doorashada ee lagu heshiiyay waxay tusaale u tahay kalsooni daradda haysa maamulka, waxana ay dhaawac ku tahay maqaamka Puntland iyo hufnaanta hanaanka socda.”
Previous articleDeni oo dardar-galiyay boobka doorashada iyo mucaaradka oo ka aamusan
Next articleXildhibaankii koowaad ee golaha Shacabka ee deeganada oo Garowe lagu doortay